Ngomzi mveliso weeMoto Drive - iTshayina Abavelisi beDrayivu yeeMoto, abaXhasi
Intshayelelo OEMQS100-01 / WX10-14 / 18 impompo peristaltic pump kucetyiswa isantya ubuninzi 100rpm; mayixhotyiswe ngentloko yempompo encinci, ilungele udonga lobunzima be-0.8 ukuya kwi-1.0mm umbhobho, ijelo elinye-lamavili amane okanye ivili ezisibhozo. Ukuqhuba ngokuthe ngqo ngumsebenzisi wohlobo lwe-stepper motor engama-42, ukusetyenziswa kofakelo oluthambileyo oluhlanganisiweyo, kunye nolwenziwo ngokweemfuno zomsebenzisi. Ngokukodwa kwizixhobo, izixhobo ezixhasa ukusetyenziswa kwe-38mL / min ukufezekisa ukuhanjiswa kolwelo olulandelayo. Iparameters Motor s ...
Inkcazo yemveliso Iquka intloko yempompo yeJY15, inyathelo lama-42 leemoto kunye nebhodi yesekethe yeDrive. Umthamo mncinci, ukufakelwa okugungxulweyo. esetyenziselwa izixhobo zaselebhu, isixhobo soHlahlelo. Iiparameter zobuGcisa: Amandla: DC12V Uluhlu lwesantya: 0 -100rpm, Isantya esihlengahlengiswayo: Iswitshi yohlengahlengiso lweswitshi, ulawulo lwangaphandle ukulawula isantya esahlukileyo. Ukuchaneka kwesantya ； 5 rpm / min Ukutyubhisha okufumanekayo: 25 #, 17 # Ubungakanani bokuhamba kwenqanaba elichaziweyo: 170ml / min Uhlobo lolawulo lwangaphandle: 0-5V, 4-20Ma, 0-10Khz Dimension: 130 * 73 * ...
Intshayelelo OEM100J series peristaltic impompo umqhubi yi 57 stepper motor ehambelana iindlela zolawulo ezahlukeneyo ukwenza isakhiwo esincinci, elula, ulawulo lula umgca peristaltic pump imveliso drive umgca. Ngokukodwa kwizixhobo, izixhobo ezixhasa ukusetyenziswa kwe-380mL / min ukufezekisa ukuhanjiswa kolwelo olulandelayo. Ukutshintsha kwe-DIP ngemowudi yolawulo lwangaphandle, umqondiso wangaphandle onganyanzelekanga u-4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz, kwaye unokubonelela ngokusetyenziswa kweemveliso zolawulo lwe-RS485. Sebenzisa ...